Maxamed Cumar Ciise ayaa BBC-da uga warramay sida u u dhacday musiibadii isbuucii hore | Biyoguurenews.com
Home Wararka Maxamed Cumar Ciise ayaa BBC-da uga warramay sida u u dhacday musiibadii...
Maxamed Cumar Ciise waa mid ka mid ah labada qof ee ka badbaaday musiibadii isbuucii lasoo dhaafay dhacday
Ku dhawaad hal isbuuc ayaa laga joogaa markii Maxamed Ciise Cumar laga soo saaray biyaha barafka ah ee badda English Channel, waxa uuna ka mid yahay labada ruux ee ka badbaaday dhimashadii ugu badneyd abid ee hal mar ka dhacday meesha laga tallaabo.
Balse isagoo ku fadhiya gawaarida curyaamiinta oo ku sugan beer lagu nasto oo ku taalla Faransiiska, ayuu 28 jirkan wali la il daran yahay dhibaatadii maskax ahaan usoo gaartay. Si jilicsan ayuu u hadlayaa, waxa uuna BBC-da u sheegay inuu kusoo qarwo waxyaabihii uu arkay habeenkaas.
“Waxaan arkay dad ku dhimanaya horteyda,” ayuu yiri Maxamed. “Dadkii naga midka ahaa ee aan dabaasha aqoonin, way ku hafteen biyaha daqiiqado gudahood ayayna ku dhinteen.
“Aad bay u qaboobaayeen biyaha, qabow aad ah.”
Maxamed waxa uu ku jiray ugu yaraan 29 ruux oo doontooda ay kasoo shiraacatay xeebta Faransiiska xilli ay saacaddu ahayd 22:00 waqtiga maxalliga ah (21:00 GMT), hal isbuuc ka hoor.
Dadka kale ee la socday waxba kama uusan aqoonin – waxayna ahaayeen tahriibeyaal naftooda halis u gelinayay inay badda ka tallaabaan si ay u gaaraan UK, safarkaas oo ah mid ay sanadkan gudihiisa sameeyeen 25,000 oo muhaajiriin ah.
Waxay socdeen qiyaastii saddex saacadood iyo bar markii ay doontooda quuseysay, sida uu Maxamed sheegay.
Halkaas marka ay xaaladdu mareysay dadka doonta saarnaa oo weli heystay telefoonnadooda ayaa sameynayay wicitaanno ay caawinaad ku dalbanayeen. Qofka kale ee la badbaaday Maxamed ayaa u sheegay warbaahin Kurdish ah inay wacayeen labada dhinac ee Ingiriiska iyo Faransiiska ka kala jira badda.
“Telefoonnadeenna waxay ku dhex jireen biyaha,” ayuu yiri Maxamed oo dib u xasuusanaya dhacdada. “Balse mid naga mid ah ayuu weli telefoon u shaqeynayay, wuxuu wacay dad, askarta [Britain] ayaana u sheegay inuu usoo diro tilmaanta goobta ay joogaan.
“Balse inta uusan u tilmaamin, telefoonkii ayaa ku dhacay biyaha, wax kale oo aan diri karnana ma jirin.”
Maxamed waxa uu maqlay nin labaad oo ku hadlayay telefoon uu codka u furnaa, wuxuuna sheegay in qofka dhanka kale kasoo hadlayay uu ahaa mid ku hadlayay luuqadda Ingiriiska.
“Balse isaga xitaa ma uusan helin wax fursad ah,” ayuu Maxamed ku yiri BBC Persian. “Biyihii ayaa telefoonka ka haleelay ka hor inta uusan waxba dirin.
“Taas ayay ahayd sababta keentay inay dadku biyaha ku haftaan una geeriyoodaan. Waxaan arkay dad ku dhimanaya horteyda, balse waxaan billaabay inaan dabaasho. Waxaan meel dheer ka arkay markab weyn, xaggiisa ayaana u dabaashay.”
Waxyaabihii kasoo haray burburka doonta iyo dadkii la socdayba waxay weli ku dhex jireen biyaha Faransiiska markii ciidanka ilaalada xeebaha laga codsaday inay gacan ka geystaan howlgalka badbaadinta ah.
Afhayeen u hadlay xafiiska wasaaradda arrimaha gudaha ee Britain ayaa sheegay: “Faransiiska ayaa hoggaaminayay howlgal raadin iyo badbaadin ah oo loo sameeyay dhacdadii biyaha Faransiiska ka dhacday Arbacadii, 24 November, halkaasoo 27 ruux ay ku geeriyoodeen.
“Intii uu howlgalka socday, Faransiisku waxay caawinaad ka codsadeen UK, waxaana garab siiyay ciidanka ilaalada xeebta ee HMG oo u tagay islamarkii ay codsiga soo gudbiyeen.”
Hay’ad ka shaqeysa ilaalada xeebaha iyo xuudaha badda ayaa sheegtay in maalinta ku beegan taariikhdaas ay “heshay in ka badan 90 qeylo dhaan, oo ay ku jiraan 999 wicitaan oo deg deg ah, kuwaasoo ay usoo direen dad ku sugnaa English Channel, dhammaantoodna laga wada jawaabay”.
Previous articleBoqor Buurmadow oo Raaligelin ka bixiyey Hadallo uu jeediyey oo Cadho badan abuuray
Next articlesomaliland oo go,aan ka qaadatay dagaalka Abisiinya